I-Barber Chop Apk Download Ye-Android [Igeyimu] - I-Luso Gamer
Ngakho-ke une-caliber futhi ulungele ukuphumelela amakhono okudala ekusikeni izinwele ezingahleliwe. Bese ulanda kangcono futhi ufake inguqulo yakamuva ye-Barber Chop Apk. Umdlalo umahhala ukulandwa futhi awudingi ukubhaliswa kwe-premium ukuze ufinyeleleke.
Laphaya ngaphandle inala yezinye izinhlelo zokusebenza zobuhle ziyafinyeleleka. Kodwa-ke, iningi lalezo zinkundla ezifinyeleleka ku-inthanethi ziyi-premium futhi zingacela okubhaliselwe. Ngaphandle kokuthenga okubhaliselwe, akunakwenzeka ukufinyelela lezo.
Kodwa namuhla lapha silethe ku-inthanethi mahhala Umdlalo we-3D, okwenza abadlali bakhombise amakhono okudlala. Abadinga ukukwenza nje ukufaka igeyimu futhi babonise amakhono abo okugunda izinwele. Uma uthanda lo mdlalo landa i-BarBer Chop Game kusuka lapha.
Iyini i-Barber Chop Apk
I-Barber Chop Apk iyi-gameplay eku-inthanethi futhi engaxhunyiwe ku-inthanethi eyakhiwe i-Lajeune & Associates, LLC. Inhloso yokuhlela igeyimu ukuhlinzeka ngenkundla evikelekile. Lapho abadlali bengaphumelela kalula amakhono abo okusika ngokususa izinwele ezisesitayeleni.
Abadlali bamageyimu be-Android sebevele babona imidlalo eminingi ku-inthanethi. Okuhle ekudlalweni futhi kuhambisana nawo wonke amadivaysi edijithali. Nokho ukufinyelela ideshibhodi eyinhloko kudinga ukubhaliswa kwe-premium. Ngaphandle kokuthenga ilayisense ye-pro akunakwenzeka ukufinyelela kuleyo midlalo.
Imidlalo yobuhle eku-inthanethi ihlanganisa iMakeup, Ukugqoka, Ukubukeka, Imfashini nokunye. Namuhla umdlalo esiwethula lapha uhlobene ne-Hair Cut. Ngisho neningi labantu lihlale lizibuza ukugunda izinwele nokwenza ukubukeka okuyingqayizivele.
Kodwa lapho uvakashela abagundi bangempela bangase bangakwazi ukuthola imiklamo abayifisayo. Ngenxa yokugunda izinwele okungagculisi, izivakashi eziningi ziyadumala. Uma ukholelwa ukuthi unekhono elihle mayelana nokugunda izinwele ungalanda kangcono i-Barber Chop Android.
Igama I-Barber Chop
Usayizi 95 MB
Unjiniyela I-Barber Chop
Igama lephakheji com.lajeuneandassociatesllc.barberchopdev
Isigaba Imidlalo - Beauty
Ukulanda nokufakwa kwesicelo kulula. Vele ulande inguqulo yakamuva ye-Apk kusuka lapha. Bese uqala inqubo yokufaka futhi uthole ukufinyelela kwamahhala okuqondile kudeshibhodi enkulu. Ngaphakathi kwedeshibhodi eyinhloko, kunezingxenye eziningi ezahlukene.
Lokho kufaka phakathi Izesekeli Zokusika, I-Anime Character, Izitayela Zezinwele kanye nenketho yesithombe-skrini. Kuze kube manje, izinhlamvu ze-anime eziyi-16 ziyatholakala ukuze uzikhethe. Kulabo abayisi-6 ngabesifazane, abangu-9 Abesilisa Abadala, 2 USanta Claus no-1 Omusha.
Yize onjiniyela bahlela ukungeza ezinye izici eziningi. Kubandakanya abalingiswa be-anime nezinhlamvu ezishiwo kungase kufinyeleleke ukukhetha ezinsukwini ezizayo. Umdlalo unikeza isibonisi se-3D esivumela abadlali ukuthi bajabulele umlingisi onyakazayo kuzo zonke izilinganiso.
Ukwengeza okukhulu okwenza igeyimu ihehe kakhulu isithonjana sekhamera eyakhelwe ngaphakathi. Manje ukukhetha isithonjana sesithombe kuzovumela abadlali ukuthi bathathe izithombe ozishuthe zona ezahlukene. Uma usuqedile ukuthatha isithombe ozishuthe sona bese usingenisa ngaphakathi kohlelo lokusebenza.
Manje nikeza ukugunda okuyingqayizivele kwezinwele zakho. Khumbula ukuthi lesi sici sitholakala mahhala futhi sidinga i-akhawunti. Lokhu kusho ukuthi ukuthola inketho kudinga ukubhaliswa. Ukubuka izikhangiso kuzosiza ekuvuleni izinto ezisikwayo. Ngakho njengomdlalo bese ufaka i-Barber Chop Download ngaphakathi kwe-smartphone.
Ukuhlanganisa umdlalo kunikeza isibonisi esiyingqayizivele se-3D.
Lapho ababambiqhaza bengaphumelela ekugundani izinwele.
Izinto ezihlukene zokususa izinwele ziyatholakala ukuze uzikhethe.
Imiklamo eminingi yengezwa ngaphakathi kwegalari.
Inketho enemininingwane yokusondeza izosiza ekususeni izinwele ngokujulile.
I-Clip Guard iyafinyeleleka ekwehliseni ukushuba kwezinwele.
Ukuze ufinyelele ukugunda izinwele okususelwa kusithombe ozishuthe sona sicela ubhalise kuqala.
Ukubuka izikhangiso kuzosiza ekuvuleni izinto ezisikwayo.
Ungalanda Kanjani I-Barber Chop Apk
Esikhundleni sokugxumela ngqo ekufakeni nasekusetshenzisweni kohlelo lokusebenza. Isinyathelo sokuqala ukulanda futhi ngalokho abasebenzisi be-android bangathembela kuwebhusayithi yethu. Ngoba lapha kuwebhusayithi yethu, sinikezela ngamafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo kuphela.
Ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo babadlali bamageyimu, siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle uma ithimba liqinisekile ngokusebenza kahle kwe-Apk. Asilokothi sinikeze uhlelo lokusebenza lokudlala ngaphakathi kwesigaba sokulanda.
Ngabe Kuphephile Ukufaka Umdlalo
Uhlelo lokusebenza lokudlala esikunikeza lapha olwangempela futhi lusekelwa i-Google Play Isitolo. Sesivele siwufakile umdlalo kuma-smartphones ahlukene e-android futhi asitholanga nkinga enkulu. Ngakho-ke abadlali bangakwazi ukujabulela umdlalo ngaphandle kokukhathazeka.
Izinhlelo zokusebenza ezahlukene zokudlala ze-Android zishicilelwa lapha kuwebhusayithi yethu. Okuhle ekudlalweni futhi kunikeza imidlalo yemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi neyokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Uma uthanda ukudlala leyo midlalo landela izixhumanisi. Labo banjalo Idolobha Lami Umhlaba Apk noFUsizo Lwe-NAF Lufuna I-Apk.
Uma udlala amakhono acacile mayelana nokugunda izinwele. Khona-ke leli yithuba lakho elingcono kakhulu lokwahlulela amakhono okusika ufaka i-Barber Chop Apk. Okufinyeleleka ukulandwa kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa mahhala.
Izigaba Beauty, Imidlalo Amathegi Umdlalo we-3D, I-Barber Chop Android, I-Barber Chop Apk, I-Barber Chop Download, I-Barber Chop Game Imeyili kwemikhumbi
I-4G Rei Net Apk Download Ye-Android [Ithuluzi]